Madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo Culimaa udiinka G/Bari oo maanta kulmay – SBC
Madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo Culimaa udiinka G/Bari oo maanta kulmay
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Gen C/samad Cali Shire iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ka mid yihiin wasiirka amaanka Punltand Khaliif Ciise Mudan iyo wasiirka maaliyada Faarax Cali ayaa maanta kula kulmay gudaha magalada boosaaso qeybaha kala duwan ee waxgaradka iyo culimada magaalada Boosaaso.
Kulankan oo ka dhacay qasriga madaxtooyada Puntland ee Boosaaso ayaa waxaa sida uu ku warbixiyay madaxweyne ku xigeen C/samad Cali looga hadlay arimaha nabadgeliyada iyo baahinta nidaamka dimuqraadiyeenta Puntland.
“Waxaan la kulanay Culimada iyo waxgaradka magaalada Boosaaso, waxaan ka wadahadalnay arimaha amaanka iyo xaaladaha kale ee dalka, waxaanna isla garanay in meel looga soo wada jeesto cidii carqaladeyn ku wada amniga” waxaa sidaasi yiri Gen C/samad Cali Shire madaxweyne ku xigeenka Puntland.
Waxaa ka mid ahaa qeybihii waxgaradka iyo nabadoonada ka qeyb galay kulankaasi Nabadoon C/qaadir Axmed xarago iyo qaarkood culimada sida weyn looga yaqan gudaha magaalada Boosaaso.
Waxyabihii sidoo kale kulankaas la isla so qaaday waxaa ka mid ahaa arimaha isbedelka nidaamkii hore Puntland ay ku dhisneyd iyo u gudubka nidaamka xisbiyada badan ee ay ku howlan tahay dowlada Puntland, taas oo uu sheegay madaxweyne ku xigeenku mar uu ka hadlayay in ay isku dhaafsadeen fegrado dhinacyada ay la kulmeen ayna wada sugayaan waxii ka soo baxa .
Waxa uu madaxweyne ku xigeenku hadalkiisa ku soo koobay in uu raali ka yahay waxyaabihii iyo doodihii ay is weydaarsadeen dhinacyadii ay maanta la kulmeen si fiicanna ay wax isula meel dhigeen .